Minisiteran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra : Mandray anjara amin’ny fiarovana ny tontolo iainana -
AccueilSongandinaMinisiteran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra : Mandray anjara amin’ny fiarovana ny tontolo iainana
Minisiteran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra : Mandray anjara amin’ny fiarovana ny tontolo iainana
13/02/2018 admintriatra Songandina 0
Mandray anjara feno amin’ny fiarovana ny tontolo iainana koa ny minisiteran’ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra ary Fampivoarana ny Haitao ara-kajy mirindra (MPTDN). Zava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana hoy ny minisitra Neypatraiky Rakotomamonjy, satria soa ho an’ny fiarahamonina rehetra. « Raha tsiahivina, 75%-n’ireo 2500 isa natsatoka tamin’ny taona lasa no naniry. Isam-bolana dia nisy ny fanaraha-maso ireo hazo novolena, ary hitohy hatrany izay fomba fiasa izay mandritra ity taona ity mba tsy hanaovana antsirambina ny fambolena azy ireny », hoy ny Ministra Neypatraiky A.Rakotomamonjy. Tsy ho antsika ihany, fa hitsinjovana ny tontolo ho lovain-jafy izy ireny , hoy izy, ny Zoma lasa teo, teny Tsimahabeomby Imeritsiatosika.
Ny ARTEC, ratsa-mangaika eo anivon’ny MPTDN, kosa dia teny amin’ny faritry ny minisitera teny Antanetibe no nanatanteraka ny azy. Fametrahana « sehatra maitso » no natao ka hazo fihinam-boa no novolen’izy ireo.
Ity fotoana ity koa no nanamafisan’ny minisitra Neypatraiky Rakotomamonjy fa « ny minisiteran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra ary ny Fampivoharana ny Haitao ara-kajy mirindra (MPTDN), dia manamafy, fa mbola tsy nisy, ary tsy manana fikasana hivarotra, amin’ny ampahany na manontolo, ny tanim-panjakana izay misoratra aminy. Mbola tsy nisy fanomezana alalàna olona, na vondron’olona hitonona ho avy amin’ny minisiera, ka hivarotra ireo tanin’ny MPTDN.
Noho izany, ny minisiteran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra ary ny Fampivoarana ny Haitao ara-kajy mirindra, dia manohitra tanteraka ny fanaisorana aminy ireo tany misoratra amin’ny minisitera.
Ny MPTDN dia mampandre sy mampitandrina fa hitory eny amin’ny fitsarana, raha toa ka misy trangan-javatra ataon’olona na vondron’olona mifanohitra amin’izao fanambarana izao ».
Toa ny efa fanaon’ny Fitondram-panjakana izay tarihin’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina manoloana ny voina mahazo ny vahoaka handalovan’ny rivodoza, dia tsy nitazam-potsiny ny Filoha fa nidina an-tsehatra avy hatrany nijery ireo traboina vokatry ny fandalovan’ny rivodoza Eliakim. ...Tohiny
Tanambe Ambatondrazaka : Voavaha ny olan’ny famatsian-drano
Maroantsetra : Olona 08 maty nihotsahan’ny rano vato